Bogga hore • Tusaalaha Dunida
———- PAGES ———-
Aqoon-isweydaarsi: oo leh qaab laga bilaabo A ilaa Z
Tijaabooyinka iyo bandhigyada
Gallery ee shaqooyinka la dhammeeyay
DIY: Samaynta Qaabka DIY
---- Dukaan ----
Ku keydi guriga
Furaha la ilaaway
Xagee laga iibsadaa
BLOG: MISLAYNTA DUGSIGA
Qeybta Blog: casharada tusaalaha, casharrada, tilmaamaha, xaqiiqooyinka xiisaha leh.
DUKAANTA DIIWAANKA: Moodellada alaabooyinka adduunka
Dukaan tafaariiq leh oo leh dalabkeena nooca: alaabooyinka ugu tayada sareeya ee loogu talagalay dadka wax iibsada.
HALKA LAGA IIBSADO
Liiska dukaamada rasmiga ah iyo jumladleyda oo leh moodeellada adduunka ee la soo bandhigo
Si loo fududeeyo marinka sababta oo ah baloogga, wax ka qorista dushiisa ayaa loo kala saaray si waafaqsan baloogyada soo socda:
Soo bandhigida farsamooyinka wasakhda iyo xirashada raadadka qaabka La shaqeynta tusaalaha laga soo bilaabo marxaladda muuqaalka toy-ka ilaa abuuritaanka dhalanteed dhab ah.
Wax walba oo ku saabsan shaqada qaabka aasaasiga ah. Ku saabsan dhejinta, farsamaynta iyo rinjiyeynta, sida ku xusan maximkeenna: samaynta moodeel laga soo bilaabo.
Xiriirka shaqada leh qaabka laga soo bilaabo jarista ugu horreysa illaa muuqaalka ugu dambeeya.
Qeyb blog ah oo loogu talagalay mowduucyada moodeellada: tiirarka, warbixinnada, wareysiyada. Warbixinnada laga soo qaatay dhacdooyinka moodelinta. Xoogaa ku saabsan militariga.
Soo bandhigida sanduuqyada ka hor dhejinta, tijaabooyinka kiimikada iyo qalabka moodelinta. Waxa aan gacmaheena ku heleyno, ujeedada iyo ujeedka.
Goobaha Ugu Dambeeya ee Mashaariicda Dhammaystiran. Dhammaan moodooyinka aan ku shaqeeyay ee si guul leh ku dhammaaday ayaa boos ku leh qaybtaan.
Maxaa ku cusub Dunida Modelarski. Wax walba oo ku saabsan waxa isbedelaya iyo waxa ka dhacaya bogagga shabakadda, laakiin sidoo kale ku saabsan wararka iyo ogeysiisyada suuqa.
Qeybtaan, waxaan ku soo bandhigeynaa qalab yar-yar oo guriga lagu sameeyo, aalado iyo aalado waxtar u leh moodleyaasha iyo dadka jecel DIY
Galitaankii ugu dambeeyay
Maxaan hada ka qoraynaa, waxa aan ku shaqeyneyno:
Saliida Wasakhda ah Wash 'ami acc. sayid Mirek Serba
Oil Wash kuwani waa badeecadayada aan si gaar ah ugu faano. Waa kuma Mirosław Serba oo ku yaal goobta qaabaynta Polish, looma baahna in la sharaxo. Nin hibo leh, oo qaab dhismeedka wax-aragga ah, iyo moodal-yaqaan leh oo leh hal-abuur weyn oo [...]
Dib-u-eegis ka socota 'Grot Orderly'
Waad ku mahadsan tahay qoraaga waxaanan kugu martiqaadeynaa inaad kala socotid warbaahinta: PAYPAL ME: https://paypal.me/Zigmunth PATRONITE: https://patronite.pl/GrotOrderly SKLEPIK CUPSELL: http: //grotorderly.cupsell. pl / DISCORD LINK: https://discord.gg/jxzq2rx PAGE ON FACEBOOK: http://www.facebook.com/GrotOrderly BLOG ON BLOGSPOT: http://www.grotorderly.pl
Filim cusub kanaalka Agtom
Maanta, goor dambe oo habeenkii ah, fiidiyow kale oo ka socda kanaalka Agtom ayaa ka duulay dhismaha haanta 7TP - IBG 1:35, wararka ka imanaya xarunta IBG. Tomek wuxuu soo bandhigay farsamada loo mariyo ranjiga wash burushka hawada. Waad ku mahadsantahay doorashada [...]
KA DAAWO DHAMMAAN SUUQA BOGGA
Gelitaanka ugu caansan
Fiiri waxa macaamiisheena ay inta badan ka akhriyaan boggayaga:
Dalbashada midabbada moodooyinka
Sidee loo sameeyaa gogosha moodada ah
farsamada dharka isbuunyada - fudud oo wax ku ool ah!
Abaabulayaasha aqoon isweydaarsiga ee ka socda HobbyZone
u qalantaa, miyaanay u qalmin? - Dib u eegis
sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee loogu gaaro saamaynta xiisaha leh tusaalaha
Ma leedahay xisaab Facebook ah? Ku soo biir kooxdayada Ku dayashada iyo Cimilada taageerayaasha!
Ka mid ahaanshaha bulshada waa fursad weyn oo aad isku soo bandhigto, raadiso dhiirigelin iyo talo raadsasho. Samee dad aqoon u leh, raac oo ku soo biir doodaha. Xusuusnow, qof kasta oo aan su'aalo weydiin aqoon ma helayo. Waxaan sidoo kale abaabulnaa tartamo wareeg ah oo abaalmarinno iyo Koobabka Adduunka ee Qaabka Koobka Adduunka ee kooxda.
Waxaan rabaa inaan ku biiro
Waa tan waxa ay naga yiraahdaan:
Xaqiiqdii waan kugula talinayaa. Qayb shaqo wanaagsan, talobixin khabiir ah, qorshayaal dhisme iyo qolalka quruxda badan ee heer kasta oo ka mid ah horumarka tusaalaha ah.
Fikrad ka timid Facebook
Waxa ugu fiican PL! Degel, dukaan, dalab aad u wanaagsan. Waxaan kugula talinayaa inaad ku biirto kooxda, dhaqanka sare.
Koox weyn oo aad u xiiso badan oo leh fikrado aad u xiiso badan
Erayo kooban oo ku saabsan qoraaga
Samaynta moodeelku waa shaqo ii cuntay yaraanteydii. Waxaan si isdaba joog ah u horumariyaa hamigeyga oo dhaliyay Dunida Modelarski: adduun aan isku dari karo hiwaayadeyda iyo nolosheyda xirfadeed. Halkee tayada la siiyaa mudnaanta oo marmarsiinyo laga dhigaa su'aasha.
Mulkiilaha Shirkadda Moderski Świat
Inbadan oo ku saabsan shirkadda
Waxaan ka shaqeynaa 09-17 gudaha UTC + 01: 00 / UTC +02: 00 waqtiga aaga
Asturnaanta & Kukiyada: Boggan wuxuu adeegsadaa cookies. Markaad sii wadato adeegsiga degelkan, waad oggolaatay isticmaalkooda.
U dir emayl cinwaanka soo socda:
© 2022 Dunida lagu daydo. Waxaa lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo WordPress iyo Dulucda Mawduuca